Mamoha, mamaka ary mamerina amin'ny Nexus 4 | Androidsis
Francisco Ruiz | | Fanarenana Android, Android Root, Rohy, Tutorials
Androany dia te hampianatra ny rehetra aho tompona Nexus 4 tsara vintana, ny terminal vaovao an'ny Google nataon'i LG, ahoana no fomba ahazoana ny hamaha, Root y Recovery novaina tamin'ny fampiasana fitaovana tokana, ny Google Nexus 4 ToolKit.
Maimaimpoana ary manan-kery tanteraka ho azy ny fitaovana Windows XP, View,7 y 8, samy amin'ny kinovan'ny 32 o 64 potika.
1 Inona no hataon'ny Unlock, Root ary Recovery ho antsika?
2 Mametraka ny Toolkit Google Nexus 4
3 Fametrahana ireo mpamily ilaina
4 Mamoha, mamaka sy miverina amin'ny Nexus 4 amin'ny tsindry iray monja
Inona no hataon'ny Unlock, Root ary Recovery ho antsika?
Hanampy antsika hanana fidirana amin'ny rakitra fisie ity Rohy 4 ary manao sy manafoana araka izay itiavantsika azy, mitandrina tsara foana ary mahafantatra izay ataontsika satria afaka mamafa ireo rakitra ilaina amin'ny asany tsara izahay.
Izy io koa dia hanampy antsika hametraka rindranasa sy hifehezana ny terminal manontolo, ary koa rehefa mametraka ny fanamboarana novaina, hahafahantsika romana nandrahoina indrindra mba hahazoana tombony betsaka amin'ity terminal mahafinaritra ity, raha ny fanazavana, eto amin'ny Androidsis dia hanolotra anao ny asa tsara indrindra mipoitra eo amin'ny tontolon'ny Sehatra sy fampandrosoana.
Mametraka ny Toolkit Google Nexus 4
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny misintona ny fanatanterahana ny Google Nexus Toolkit avy amin'ity rohy ityVantany vao alaina dia hataontsika amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa ao aminy sy fanekena ireo fahazoan-dàlana nangatahina.
Raha vantany vao miseho ny varavarankely etsy ambony, dia tsindrio fotsiny Manaraka, Manaraka, Manaraka, mandra-pisehoan'ity varavarankely vaovao ity izay tsy maintsy hanamarinantsika fa voamarika ireo boaty roa.
Vantany vao vita ny fametrahana ny programa dia ho tanterahina ho azy izy io ary hiroso amin'ny fametrahana ny mpamily ilaina amin'ny kinovan'ny Windows.
Fametrahana ireo mpamily ilaina
Ny zavatra voalohany ho hitantsika rehefa manokatra ny Fitaovana Nexus 4 Izy io dia fikandrana karazana terminal MS-dos izay manontany antsika raha te hanamarina ireo fanavaozana isika, ary hamaly izany "Ary izao dia".
Manaraka, tsy maintsy misafidy ny kinova ny Android mihazakazaka ny fitaovantsika, izay amin'ity tranga ity no ho ny kinova farany 4.2, noho izany dia tsindrio ny safidy 1.
Ankehitriny, eo amin'ny efijery lehibe amin'ny programa dia hofidintsika ny Safidy 1 izay hametraka ireo mpamily ho an'ny rafitra fiasanay.
Misafidy ny kinova an'ny Windows ary miandry izahay hamita ny fametahana ireo mpamily mifanitsy aminy. Raha vantany vao vita ny fametrahana ny mpamily dia tsy maintsy averintsika indray ny solosaina mba ho vita tsara ny fametrahana ary tsy manana karazana olana isika.
Raha vao manomboka indray dia hiroso amin'ny hamaha, Root y Recovery amin'ny tsindry iray monja.
Mamoha, mamaka sy miverina amin'ny Nexus 4 amin'ny tsindry iray monja
Ny voalohany dia avy amin'ny Rohy 4 mampihetsika ny Famafana USB izay ao anaty menio fandrindrana / safidy amin'ny fampandrosoanaRaha tsy miseho io safidy io dia azonao atao ny mampandeha azy ao anaty menio Famaritana / Fampahalalana momba ny telefaona / Isan'ny fananganana na laharana Build, izay tsy maintsy tsindrio impito eo ho eo.
Ankehitriny dia tsy maintsy ataontsika ny Rohy 4 en Fomba fampidinana, noho izany dia hovonoinay tanteraka izy io ary hodinihintsika amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra midina miampy bokotra herinaratra miaraka amin'izay mandritra ny segondra vitsy.
Hifandray amin'ny solosaina izahay ary hampandeha ny Google Nexus 4 ToolKit indray.
Amin'ity indray mitoraka ity dia hisafidy ny safidy isa 8 ary homenay ny Midira
Avy eo dia hofidintsika ny safidy isa 2
Safidio amin'ny safidy farany 1 izay mifanaraka amin'ny ClockworkMod Recovery
Tsy mila miandry fotsiny ny programa vao hanao ny asany isika, izany hoe tsy mila hotapahina ilay Rohy 4 ny tariby USB na inona na inona toe-javatra misy mandra-pahavitan'ny dingana rehetra, dia tadidio fa na dia mandeha aza ny programa dia hiverina indray ny terminal imbetsaka.
Ho fantatsika fa vita izany, rehefa ao anaty vatasarihana fampiharana ny Rohy 4 andao jerena ny fampiharana Super mpampiasa o Supersu.
Amin'izay dia ho mpampiasa faka isika ary hametraka ny ClockworkMod Recovery izay ahafahantsika manao backup, (nandroid backup), na ny tena zava-dehibe indrindra, romana nandrahoina ary vonona ny hamoaka ny fahafaha-manao feno an'ny terminal be mpitady indrindra tato ho ato.
Fanazavana fanampiny - Nexus 4, manana ny unboxing izahay
Ampidino - Google Nexus ToolKit V1.3.0
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Rohy » Nexus 4, mamaha, mamaka sy miverina amin'ny Dummies
Fanontaniana lehibe, very miaraka amin'izany ny antoka? 🙂
Miaraka amin'ny dingana vita eny, na dia eo aza io ToolKit io ihany dia afaka miverina tanteraka amin'ny fanjakan'ny orinasa ianao.
murfisline dia hoy izy:
Salama Francisco, efa namaly ahy tamin'ny SGS izay ananako ve ianao izao, ary manana ny Nexus 4 aho izao ... Hitako fa tsy feno ny romiko ary tiako ho fantatra raha ho feno na hitovy ilay iray anananao eto.
Fantaro ihany koa raha manolotra efitrano masaka ho an'ny nexus 4 ianao, misaotra mialoha ...
Valiny amin'ny murfisline
Ity Tuto ity dia ho an'ny root sy recvery, amin'ny OS manaraka dia hanome soso-kevitra ROM aho, koa miarova hatrany amin'ny Androidsis.
Tamin'ny 10/02/2013 21:00 PM, «Disqus» nanoratra:
Jesus Taghavi dia hoy izy:
Toy ny resinao dia mandresy ianao. Tsy fizotra tsy azo ovaina io. Tahaka ny anaovanao robot sy mamoha ny bootloader, azonao atao ny manala ilay robot ary manidy azy io hamela azy hitovy amin'ny nahazoanao azy tao anaty boaty. Izany dia raha amin'ny dingana roa avelanao ho madio ny finday ka apetraho mialoha ny zavatrao.
Mamaly an'i Jesús Taghavi
Gerard dia hoy izy:
Miaraka amin'ny safidy fahatelo (Root / Unroot Option), hamafa ny angon-drakitra rehetra amin'ny finday ve ianao?
Valiny tamin'i Gerard
Heveriko fa raha tsara kokoa ny manaova backup
Tamin'ny 14/02/2013 09:48 PM, «Disqus» nanoratra:
Arturo Ramirez Martinez dia hoy izy:
Nanaraka ny dingana rehetra aho ary ny hany zavatra tratro dia ny fananako ny Nexus 4 ho vaovao avy amin'ny ozinina, saingy miorim-paka, tsy misy mihitsy.
Izao dia maharitra adiny roa vao hiverina any amin'ireo rakitrao rehetra ary misintona ny fampiharana ahy, mandamina sary masina, mampiditra mpampiasa sy teny miafina….
Tonga hatramin'ny farany amin'ny fiezahana hanongotra ny Nexus 4 aho !!!!!
Valiny tamin'i Arturo Ramirez Martinez
Raha manaraka ny dingana mankany amin'ilay taratasy ianao dia tsy tokony hanana olana. Efa nanetsika ny deboka USB ve ianao?
Nametraka ny mpamily amin'ny PC-nao ve ianao ary mamerina mandefa?
Manaova kopia voafafa amin'ireo rindranasao rehetra miaraka amina programa mitovy amin'izay tsy mila mikapoka ny tenanao avy eo.
Tamin'ny 26 feb 2013 19 02:XNUMX, nanoratra i Disqus:
Eny Francisco efa narahako ny dingana rehetra ary tsy nisy na inona na inona… .Nanana SGS 1 aho taloha ary efa haiko ny mamaka sy mamolavola ary manaraka tsara ireo dingana rehetra. Amin'izao fotoana izao dia tsy te hijaly amin'ity fakany indray ity aho, afa-po amin'ny fanaovana doka amin'ny fampiharana rehetra (izay no tena tsy maintsy hongotako, manala ny famoahana rehetra)
MdOS dia hoy izy:
Valiny tamin'i MdOS
Chat dia hoy izy:
Tsy mandeha izy io, ka manomboka ary manamboatra ny kaonty google indray aho, ary mametraka azy amin'ny fomba debugging indray, tsy eken'ny Tools izany. Amin'ity fomba fiasa ity no hany zavatra ho tratrarinao dia ny famolavolana ny telefaona an-tariby, aza mandany fotoana amin'ity lesona ity
Valiny amin'ny Chat
Zahao ity ..
cantabrox dia hoy izy:
Hitako fa efa elaela izay. Ary alohan'ny ataoko dia manana fanontaniana roa aho.
1) mifanaraka amin'ny varavarankely 8?
2) Toy izany koa no ataoko raha 4.2.2 izao ny kinovako android?
3) Aiza no lazainao hametrahana ny maody fampidinana (avy amin'ny i9000) aho, inona no safidy apetrako? Fantatrao ilay fastboot, sa tsy izany?
Raha misy mamaly ireo fanontaniana 3 ireo dia noheveriko fa ilay "tahotra" efa tranokala ataoko ...
Valiny amin'ny cantabrox
Alek dia hoy izy:
Nataoko tsikelikely ny Tuto tamin'ny litera ary ny hany zavatra vitako dia ny famolavolana ny Nexus4, nisy olona afaka namaka azy tamin'ity fampianarana ity ve?
Valiny tamin'i Alek
Zahao ity rohy ity, mitovy amin'ny dingana amin'ny horonan-tsary ... Mety tsy mahita antsipirihany sasany ianao na nanesotra ny Nexus alohan'ny fotoana ..
Ity fomba ity dia natao hamolavolana ny telefaona. Azafady mba omeo hevitra izany, satria fahasoavana lehibe tokoa ny nahafoana ny data rehetra ...
Salama, voalohany indrindra, misaotra betsaka anao nizara, faharoa heveriko fa mahafinaritra izany ary vao vitako ny fizotrany, fa fahatelo ... ahoana no hahafantarako raha nahavita ny zava-drehetra tsara aho ???
Ianao dia tokony ho nametraka fitaovana antsoina hoe SuperSU .. Hamarino raha efa navadika izy io, fidio ary tokony hasehony anao ny hafatra milaza toy izao: «Miarahaba anao! Ity fidirana ity dia manana fidirana faka »..
Raha ny marina dia tsy tokony hotapahinao ny Nexus alohan'ny hanaovako izay nolazaiko anao ...
Tsia, ahitsiko, tsy mandeha mihitsy io, na dia manaraka ny dingana rehetra aza. Nojereko fotsiny dia mitovy, tsy misy faka. Vahaolana .. very daholo koa ve ny zava-drehetra!
Angamba efa nesorinao mialoha ny fotoana ny Nexus 4 .. Ity misy rohy iray, izay nohazavaina ny fizotra mitovy amin'ity, fa amin'ny horonan-tsary ..
Sintomy ny dikanteny ho an'ny horonantsary YouTube